Barcelona ayaa aaminsan in laacibkeeda Lionel Messi uu diyaar u yahay inuu ku biiro Manchester City laakiin kooxdan sida weyn u dhiban ee LaLiga ayaa isha ku heysa inay ku iibiso Messi heshiis ku kacaya £250million (€280million), sida laga soo xigtay The Mirror.
Messi ayaa doonaya inuu ka tago Barca iyadoo laacibkan 6-da jeer hantay abaalmarinta Ballon d’Or lala xidhiidhinayo kooxaha waaweyn ee Man City, Inter Milan, Juventus iyo Paris Saint-Germain.
Si kastaba ha ahaatee, City ayaa dareensan inay aad ugu dhawdahay inay ku soo xerogeliso Messi garoonka Etihad iyadoo Barca ay si aad ah isugu dayayaan inay lacag ka helaan, iyadoo xiddiga reer Argentina uu rajeynayo inuu si xor ah uga tago.
Dhanka kale, warar baahsan ayaa sheegaya in Messi uu u sheegay Barca inuusan ka qeyb geli doonin shaybaadhka u diyaargarawga xilli ciyaareedka soo socda.
– ESPN ayaa sheegtay in Manchester United ay ugu cadcadahay saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ajax Donny van de Beek. Xiddiga reer Holland ayaa lala xidhiidhinayay Barca iyo Real Madrid laakiin United ayaa ugu cadcad inay gacanta ku soo dhigto 23 jirkan.
– Thiago Alcantara ayaa weli xiiseynaya inuu u dhaqaaqo Premier League laakiin Liverpool ayaan weli wax dalab ah ka gudbin xiddiga Bayern Munich, ayuu yiri Fabrizio Romano.
– Goal ayaa sheegeysa in Chelsea ay dalab €20million (£18million) ka gudbisay goolhayaha Rennes Edouard Mendy iyadoo shaki laga muujinayo inuu sii joogi doono Kepa Arrizabalaga.
– Everton ayaa bartilmaameedsaneysa goolhayaha United ee Sergio Romero, sida ay qortay Daily Mirror. Goolhayahan reer Argentina oo ah beddelka labaad ee David de Gea – ayaa sidoo kale lala xidhiidhinayay kooxda Leeds United oo sannadkan Premier League u soo dalacday. Sky Sport ayaa iyana sheegaysa in Everton ay heshiis la gaadhay Allan oo ay kala soo wareegeen Napoli.
– Sida laga soo xigtay Tuttosport, weeraryahanka Barca Luis Suarez ayaa doonaya inuu u dhaqaaqo kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus ka dib markii Xiddiga reer Uruguay loo sheegay inuu ka tagi karo kooxda reer Spain.
– Laacibka Brescia Sandro Tonali ayaa sheegay inuu u dhaqaaqayo Milan, sida uu qoray wargayska La Gazzetta Sportiva. Inter ayaa ugu cadcad inay la soo wareegaan Tonali laakiin kooxda ay xafiiltamaan ee AC Milan ayaa u muuqata kuwa doonaya inay la soo wareegaan isla xiddigan reer Italy.
Previous PostNinka Dunida ugu taajirsan Jeff Bezos oo weli sii taajiraya Next PostSweden: Mudaharaadyo ka dhashay kitaab Qur’aan ah oo la gubay